သွေးအမျိုးအစားအပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားသွားလေ့ရှိတဲ့ အချစ်အပေါ် သဘောထားများ
June 23, 2019 Cele Love 0
သွေးအမျိုးအစားအပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားသွားလေ့ရှိတဲ့ အချစ်အပေါ် သဘောထားများ သွေးအမျိုးအစားတွေကလည်း လူတစ်ယောက်ကို အများကြီးသက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။ သွေးအမျိုးအစားအလိုက် စိတ်နေစိတ်ထား၊ ခံယူချက်၊ ခံစားချက်တွေ ကွဲပြားနေပြီး လူတစ်ယောက်ရဲ့ အကြောင်းကို သွေးအမျိုးအစားကနေတစ်ဆင့်လည်း ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ သွေးအမျိုးအစားအလိုက် အချစ်အပေါ် သဘောထားနဲ့ ခံယူချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင်ရော ဘယ်သွေးအမျိုးအစားလဲ၊ မှန်ရဲ့လား […]
တရုတ်အမျိုးသမီးတွေ ဆယ်စုနှစ်စာချီပြီး ငယ်ရွယ်နုပျိုနေရတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် (၁၀)ခု
တရုတ်အမျိုးသမီးတွေ ဆယ်စုနှစ်စာချီပြီး ငယ်ရွယ်နုပျိုနေရတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် (၁၀)ခု တရုတ်နိုင်ငံက အမျိုးသမီးတွေဟာ ရှိရင်းစွဲအသက်ထက် ပိုငယ်ရွယ်နုပျိုပြီး ချောမောလှပကြတယ်၊ အသားလေးတွေဆိုလည်း ဖြူဆွတ်ပြီး နူးညံ့ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ငယ်ရွယ်နုပျိုပြီး လှပနေကြတာဟာ သူတို့တွေ အမြဲလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ တရုတ်ရိုးရာအလှအပနည်းလမ်းလေးတွေကြောင့်လို့ သိရပါတယ်။ ကဲ ပျိုမေတို့လည်း တရုတ်မလေးတွေလို နုပျိုလှပဖို့အတွက် သူတို့ရဲ့ […]
တစ်ညတည်းနဲ့ ဝက်ခြံတွေ အရှင်းပျောက်သွားအောင် လုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ …
တစ်ညတည်းနဲ့ ဝက်ခြံတွေ အရှင်းပျောက်သွားအောင် လုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ … ပွဲသွားခါနီး (ဒါမှမဟုတ်) သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ချိန်းထားတာရှိရင် မျက်နှာပေါ်မှာ ၀က်ခြံပေါက်လာတာက ဆိုးတဲ့ခံစားချက်ကြီးပါ။ နောက်နေ့ပွဲရှိတယ်ဆိုရင် ဒီနေ့လိုနေ့မျိုးမှာ ၀က်ခြံပေါက်လာတတ်တာ သဘာဝပါ။ အကြောင်းကတော့ မနက်ဖြန်သွားရမယ့်ပွဲအတွက် စိတ်ဖိစီးနေလို့ပဲဖြစ်တယ်။ ဒီလိုအချိန်မျိုး ၀က်ခြံပေါက်လာရင်တော့ ဆေးခန်းပြစရာမလိုဘဲ တစ်ညတည်းနဲ့ အရှင်းပျောက်သွားစေမယ့်နည်းတွေကို […]
ဦးနှောက်အကျိတ်ရှိနေနိုင်တဲ့အတွက် မပေါ့ဆသင့်တဲ့ လက္ခဏာ (၇) မျိုး …
ဦးနှောက်အကျိတ်ရှိနေနိုင်တဲ့အတွက် မပေါ့ဆသင့်တဲ့ လက္ခဏာ (၇) မျိုး … ဦးနှောက်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အရေးကြီးဆုံး အစိတ်အပိုင်းတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အတွေးအခေါ်၊ အာရုံတွေအားလုံးအပြင် ခံစားချက်တွေကိုတောင် ဦးနှောက်က ထိန်းချုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးနှောက်မှာ အကြိတ်ရှိနေပြီဆိုရင်တော့ ကင်ဆာအဆင့် မရောက်သေးခင်မှာ အချိန်မီသိရှိပြီး ကုသမှုခံယူဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ […]
ကလေးတွေကို ကြီးသည်အထိ ဆိုက်ကိုဖြစ်သွားစေနိုင်လို့ မိဘတွေ မသုံးသင့်တဲ့စကားများ….
ကလေးတွေကို ကြီးသည်အထိ ဆိုက်ကိုဖြစ်သွားစေနိုင်လို့ မိဘတွေ မသုံးသင့်တဲ့စကားများ…. မိဘတိုင်းကတော့ ကိုယ်မွေးထားတဲ့ သား၊သမီးကို မချစ်တဲ့သူ မရှိပါဘူး။ ကလေးတစ်ယောက်ကို လိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်၊ ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ လူတစ်ယောက် ဖြစ်လာအောင် ပြုစုပျိုးထောင်တယ်ဆိုတာဟာ တကယ်တော့ လုံးဝကို မလွယ်တဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ တခါတလေမှာတော့ မိဘတွေက ဖြစ်ချင်ဇောနဲ့ တွန်းအားပေးတဲ့အခါမှာ ထွက်ကျလာတဲ့ […]
သင့်ကောင်လေးက သင့်ကို ရူးရူးမူးမူးချစ်မိနေပြီဆိုရင် ဒီအပြုအမူတွေ လုပ်နေပါလိမ့်မယ်
သင့်ကောင်လေးက သင့်ကို ရူးရူးမူးမူးချစ်မိနေပြီဆိုရင် ဒီအပြုအမူတွေ လုပ်နေပါလိမ့်မယ် လူတစ်ယောက် သင်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာကို အပြောချည်းပြောရုံနဲ့မလုံလောက်နိုင်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ စကားချည်းပဲမို့လို့ပါ။ အဲ့လိုမျိုးဆို လူတိုင်းပြောနိုင်တာပေါ့။ ယောက်ျားတစ်ယောက်က သင်ကို တအားချစ်မိနေပြီးဆိုရင် အမူအရာကနေ သူ့ရဲ့အချစ်ကိုပြမှာပါ။ အဲ့ဒါကြောင့် သင်ကို ချစ်၊မချစ်ဆိုတာ သူ့ရဲ့ အမူအရာကနေ သိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ကို တကယ်ချစ်၊မချစ် […]
တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကိုအရမ်းလွမ်းနေမှန်းသိနိုင်မယ့် ထူးထူးခြားခြား လက္ခဏာ (၃) မျိုး..
တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကိုအရမ်းလွမ်းနေမှန်းသိနိုင်မယ့် ထူးထူးခြားခြား လက္ခဏာ (၃) မျိုး.. အချစ်မှာ ထူးဆန်းတဲ့ မှော်စွမ်းအင်ရှိတယ်လို့ လူတစ်ချို့ကပြောကြပါတယ်။ ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကိုလွမ်းတဲ့အခါ သူတို့ကိုယ်တိုင်က ဖွင့်မပြောရင်တောင် သဘာဝတရားကြီးက သူတို့အစား ပြောပေးတတ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်က သင့်ကို ဖွင့်မပြောပဲ တိတ်တိတ်လေးအရမ်းလွမ်းနေတယ်ဆိုတာကို သိနိုင်မယ့်လက္ခဏာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ….. […]
မိန်းကလေးတစ်ယောက် ကားဂိတ်မှာကားစောင့်နေတုန်း အနားကပ်ပြီး လူမဆန်စွာလုပ်သွားတဲ့ ဖြစ်ရပ်
မိန်းကလေးတစ်ယောက် ကားဂိတ်မှာကားစောင့်နေတုန်း အနားကပ်ပြီး လူမဆန်စွာလုပ်သွားတဲ့ ဖြစ်ရပ် ယနေ့မှာပဲ May Eain Dra ဆိူတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင် ကလူမှုကိုယက်မှာ လူမဆန်စွာ ယူတ်မာသွားတာကို အခုလိုရေးသွားပါတယ် …. ။ ဒီလုပ်ရက်ကတော့ အရမ်းရိုင်းပါတယ် အပြင်သွားစရာရှိလို့ ကားဂိတ်မှာကားစောင့်နေတာပါ အနားကိုကပ်လာပြီးကွမ်းတံထွေးနဲ့ ထွေးသွားတယ် ပထမတော့မသိလိုက်ဘူး အနောက်ကိုကြည့်လိုက်မှတော်တော်ပေသွားတယ် …. […]
အဘိုးဖြစ်သူမှ(၁၃)နှစ်အရွယ် မြေးမလေးအား ညစ်ညမ်းကားများပြပြီး ကြံစည်မှုဖြစ် …
အဘိုးဖြစ်သူမှ(၁၃)နှစ်အရွယ် မြေးမလေးအား ညစ်ညမ်းကားများပြပြီး ကြံစည်မှုဖြစ် … အဘိုးဖြစ်သူမှ(၁၃)နှစ်အရွယ် မြေးမလေးအား ညစ်ညမ်းကားများပြပြီး ကြံစည်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ ပါတယ် …။ ညောင်​ကျိုး ကျွဲ​လေး ၂၂.၆.၂၀၁၉ တအိမ်​ထဲအတူအိပ်​​နေစဉ်​ သားမယားအဖြစ်​ပြုကျင့်​ရန်​ ကြံစည်​​ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်​ အမှုဖြစ်​စဉ်​မှာ…..ပဲခူးတိုင်း​ဒေသကြီး အ​နောက်​ ပန်း​တောင်းမြို့နယ်​ဥသျစ်​ပင်​စခန်းအ​နောက်​ဘက်​ ၂၆မိုင်​ခန့်​အကွာ​ညောင်​ကျိုးအုပ်​စုကျွဲ​လေး​ကျေးရွာ​နေ​ဒေါ်သန်းသန်းရီတိုင်​တန်းသည်​မှာ ၂၁.၆.၂၀၁၉ (၁၆း၀၅)အချိန်​​တောင်​ကုတ်​မြို့နယ်​သ​ပြေ​ကျေးရွာအုပ်​စု​နေ အ​ဒေါ်ဖြစ်​သူ​ဒေါ်​သောင်းရီထံသို့ပို့ထား​သောသမီးငယ်​ […]
အမျိုးသမီးတိုင်းအတွက် အသုံးဝင်လို့ သိထားသင့်တဲ့ Menstrual Cup အကြောင်း …
အမျိုးသမီးတိုင်းအတွက် အသုံးဝင်လို့ သိထားသင့်တဲ့ Menstrual Cup အကြောင်း … ဒီခွက်ကို မြင်လိုက်ရင် ဘာခွက်လဲ၊ ဘာနေရာမှာ သုံးတဲ့ ပစ္စည်းလဲ..ဆိုတဲ့ မသိတဲ့ သူတစ်ချို့ရှိနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာအမျိုး သမီးတော်တော်များများက သူတို့ရဲ့ လစဉ် ကိစ္စကို Pad ထုပ်၊ Tampon တွေနဲ့ ပဲ […]